HPC Series Automatic fracturing Cup Ukwenza Machine - China Guangdong Jinxin Machinery
Ukuzalisa ke Uphawu Machine
Bottle uthule Machine
HPC Series Automatic fracturing Cup Ukwenza Machine
Yb Series ogobele Surface offset Machine
XC Full High-speed oluzenzekelayo Umshini Ndiyila Machine
Port: Ningbo okanye Shanghai Port
Mode / Ipharamitha HPC-660 HPC-700 HPC-720 HPC-750
izinto ezikhoyo PP, PE, PET, iinyonga, GPPS
Area senziwe (mm) 650 × 320 700 × 350 720 × 450 750 × 500
Ubunzulu senziwe (mm) 120/180 120/180 120/180 120/180
Speed ​​senziwe (imijikelo / min) 20-35 20-35 20-35 20-35
Ukutyeba (mm) 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0
Amandla umatshini uphela (kW) ≤45 ≤50 ≤55 ≤65
ukumoshwa Air (MPA) 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
ukumoshwa kwamanzi (m3 / h) ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.6
Thermoforming nokupakishwa umgqomo ezifana neekomityi, iibhokisi, nezitya. Ezifana neekomityi ubisi, iikomityi ijeli, iikomityi cream ice, iikomityi omnye-off, nezitya pasta nangoko, iibhokisi uzila ukutya, iibhokisi ukutya njalo njalo.
1. Le Umatshini isebenzisa xi ngamanzi ukuvelisa iimveliso, ukubaleka oluzinzileyo, ingxolo encinane, elungileyo ubuchule ngumngundo lwekeyboard.
2. Electromechanical, igesi, ukuhlanganiswa xi yiHydraulic, ulawulo PLC, ukuguqulwa rhoqo ngendlela ophezulu.
3. isantya Completely okuzenzekelayo fast imveliso. Ngokufaka ezibolile ezahlukeneyo ukuvelisa iimveliso ezahlukeneyo.
4. Sebenzisa amazwe yemiyinge adumileyo izixhobo zombane kunye womoya, nokubaleka oluzinzileyo, umgangatho ethembekileyo kunye nobomi obude.
5. Lo matshini yonke Ngokomzi, omnye ulisebenzisa inawo onke imisebenzi, efana ngokucinezela yokupha, ukwakha, ukusika, ukupholisa bagqiba imveliso bevuthela. inkqubo elifutshane, umgangatho ophezulu kweemveliso ezigqityiweyo kwaye ukuhlangabezana umgangatho sanitary wesizwe.
6. Lo matshini ubulungeleyo ku tswala PP, PE, PET, iinyonga, GPPS kunye nezinye iimveliso zeplastiki, ezifana indebe, ibhokisi, isitya njalo njalo. Umzekelo, ikomityi ubisi, indebe ijeli, indebe ice cream, ikomityi enye-off, nangoko pasta isitya, ibhokisi uzila ukutya, ibhokisi ukutya njalo njalo.
: Previous Cutting HPC-660 Automatic jelly Cup and ingqokelela Machine
Okulandelayo: RCX Series Automatic Cam Cup Ukwenza Machine
Cup Automatic Ukwenza Machine
oluzenzekelayo Plastic Cup Ukwenza Machine
Izixhobo Cup Ndiyila
Banokubulawa Cup Ukwenza Machine
Ehlala Cup Machine Ukwenza
Zenzekelayo ngokupheleleyo Cup Machine Ukwenza
fracturing Cup Ukwenza Machine
Plastic Cup Ukwenza Imitshini
Kk Cup Machine Ukwenza
SERVO-720 Automatic Servo Cup Ukwenza Machine
HPC -860 Automatic fracturing Cup Ukwenza Machine
HPC-720 Automatic fracturing Machine For bufanelekile
ASPII110 / RCX700 Udityaniso Sheet extrusion ...
RCX-700 oluzenzekelayo Tilt-sokubumbela Cup Ukwenza Machine
RCX Series Automatic Cam Cup Ukwenza Machine
Dibanisa: JINXIN Industrial Zone, HuaXinCheng, ChaoShan Road, Shantou City, kwiPhondo Guangdong, China